Bafundi abathandekayo, kunekhulu lezifundo zaseJalimane esizeni sethu. Phezu kwezicelo zakho, siqoqe lezi zifundo zabafundi bamabanga aphansi naphezulu futhi sazihlukanisa ngezigaba. Sihlukanise izifundo zethu zaseJalimane ezilungiselelwe ngokulandela ikharikhulamu yezemfundo kazwelonke esetshenziswe ezweni lethu yabafundi bebanga le-11 nele-12 futhi okubalwe ngezansi.
Njengoba wazi, izifundo zaseJalimane zibuthakathaka kancane kula mabanga, ikakhulukazi njengoba amabanga we-12 elungiselela ukuhlolwa kokungena eyunivesithi. Ukuphindaphinda okujwayelekile kwenziwa kwezinye izikole futhi kufundiswa izifundo ezintsha kwezinye izikole. Ngakho-ke, uhlu lwezifundo esizinikeza ngezansi kungenzeka lungahambisani ncamashi nezifundo ezifundiswa ezikoleni. Ngalesi sizathu, kule ndatshana, sinqume ukunikeza ibanga le-11 kanye nebanga le-12 ndawonye.
Ngezansi kunohlu lwezifundo zethu zaseJalimane ezikhonjiswe abafundi bebanga le-11 nele-12 ezweni lethu lonke. Uhlu lwamayunithi aseJalimane olungezansi luhlelekile kusuka kokulula kuya kokunzima Kodwa-ke, ukuhleleka kwezihloko kungahluka kwezinye izincwadi zokufunda zaseJalimane nakwezinye izincwadi ezengeziwe.
Izihloko eziboniswa kumabanga ajwayelekile we-11 no-12 eTurkey zifaka, kepha kungenzeka zingacubunguli amanye amayunithi ngokuya ngokuthanda kothisha waseJalimane, noma zingangezwa ngokuqhubekayo njengamayunithi angaqondakali asetshenzwa, amanye amayunithi angavunyelwa, isb. Isigaba se-11 ekilasini elilandelayo noma kwiyunithi 9. Ngenkathi usekilasini kungenzeka ukuthi kusetshenzisiwe. Kodwa-ke, izihloko ezihlanganiswe ezifundweni zaseJalimane emabangeni we-11 no-12 zimi kanje.
Izifundo zeJalimane zeBanga le-11 nele-12
Ama-Body Body Organs
Isigaba sesichasiselo sesiJalimane
IsiJalimane iTrennbare Verben
Izilinganiso zesiphawulo saseJalimane
Isihlanganisi sesiphawulo sesiJalimane
Bafundi abathandekayo, izihloko ezihlanganiswe ezifundweni zaseJalimane emabangeni we-11 nele-12 ngokuvamile zingenhla. Sonke sinifisela impumelelo.
# Izifundo zeJalimane zeBanga le-11 nele-12
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-12 ezedlule, ngomhla ka-08 Disemba 2020, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngomhla ka-15 kuZibandlela 2020.
Tags: Izifundo zase-grade 11 zaseJalimane, 11. inkulumo yesi-German yesifundo, Izifundo zase-grade 12 zaseJalimane, 12. inkulumo yesi-German yesifundo, I-11 yesiJalimane. inkulumo yesifundo sekilasi, Izihloko zebanga le-11th ngesiJalimane, I-12 yesiJalimane. inkulumo yesifundo sekilasi, Izihloko zebanga le-12th ngesiJalimane